Difaaca Iimaanka, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
»Waxaan u malaynayaa inay lagama maarmaan tahay in aan warqaddayda kugu waaniyo oo aad u dagaallanto iimaanka aaminka ah ee quduusiinta oo loo hayo Malaakii oo dhan» (Yuudas 3).
Waxaan dhawaan eegay mid ka mid ah qadaadiicda markii aan helay markii aan iska beddelay England oo aan ku arkay qoraal ku saabsan sawirrada boqoradda: »Elisabeth II DG REG. FD. » Taasi micnaheedu waa: «Elisabeth II Difaacaha Gratia Regina Fidei». Waa jumlad Latin ah oo laga heli karo qadaadiicda England oo dhan oo macnaheedu yahay: “Elizabeth II, nimcada Eebbe, Boqoradda, difaaca diinta.” Boqoraddeenna, kani maahan cinwaan u dhexeeya cinwaanno kale oo badan, laakiin waa mas'uuliyad iyo rafcaan aaney si dhab ah u qaadin oo keliya, laakiin ay si daacad ah u fulisay sannadihii ay ku jirtay carshiga.
Sanadihii ugu dambeeyay, farriimaha boqoradda ee Kirismaska ​​waxaa lagu hayaa cod macaan oo Masiixi ah, oo ah magaca Masiixa oo laga soo xigtay kutubta dhexe ee farriinteeda. Farriinta 2015 waxaa loo arkaa kan ugu Masiixiyiinta badan maxaa yeelay waxay ka hadashay mugdi sanadkii la soo dhaafay iyo nalka laga helay Masiixa. Farriimahaan waxaa arka boqolaal milyan oo dadyow ah oo adduunka ah iyo Boqoradda oo fursaddan u siineysa inay la wadaagto caqiidadeeda dhagaystayaasha waaweyn.
Waxaan laga yaabaa inaan waligeen awoodi doonin inaan wax ka qabanno malaayiin dad ah, laakiin waxaa sidoo kale jira fursado annaga aan la wadaagi karno qaar ka mid ah caqiidadeenna. Fursado ayaa ka soo baxa shaqada ama iskuulka, qoysaskeena ama deris la ah. Ma waxaan ka faa’iidaysanaa fursadaha marka ay soo baxaan? Annagu looma yeedhin “Difaacayaasha Iimaanka,” laakiin nimcadda Eebbe, midkeen kastaaba wuxuu noqon karaa difaac xagga iimaanka haddii aan la wadaagno injiilka waxa Ilaah u qabtay dunida xagga Ciise Masiix. Midkeen kasta wuxuu leeyahay sheeko uu uga sheekeeyo sida Eebbe ugu shaqeeyay noloshiisa iyo sida uu ugu shaqeyn karo nolosha kuwa kale. Adduunku si deg deg ah ayuu ugu baahan yahay inuu maqlo sheekooyinkan.
Runtii waxaan ku nool nahay adduun mugdi ah waxaanan rabnaa inaan ku dayno tusaalaha boqoradda oo aan ku faafinno iftiinka ciise, si aan u difaacno caqiidadeena. Waxaan sidoo kale leenahay mas'uuliyaddan, midda ay tahay inaan si dhab ah u qaadno. Waa farriin muhiim ah oo aan looga tegi karin Boqoradda Ingiriiska keligeed.
Aabe, waad ku mahadsantahay boqoraddeena iyo sanadihii badnaa ee adeegga dadaalka badan. Aan ka baranno tusaalahooda oo aan u noqonno difaacayaasha iimaanka adeeggayaga. Aamiin.
waxaa qoray Barry Robinson